Wararka iyo faahfaahinta Rekonq 0.9 ayaa noo keeni doona | Laga soo bilaabo Linux
Wararka iyo faahfaahinta Rekonq 0.9 ayaa noo keeni doona
ajam shalay wuu na hormariyey wax ku saabsan nooca 0.9 de rekonq.
Markii uu faallo ka bixinayay qoraalkiisa, wuxuu rajaynayaa in isbeddeladan adeegsadaha uu ku raaxeysan doono dheecaan badan, deg deg ah, iyo raaxo macaan. Kuwani waa qaar ka mid ah isbeddelada / wararka noocan cusub uu noo keeni doono:
Farsamaynta soo-jeedinta ee URL-yada, tani waxay isku dayi doontaa inay qiyaasto bogga uu adeegsadaha furayo oo uu soo bandhigi doono soo-jeedimaha. Horeba ajam ka hadlay Halkan y Halkan.
Dib loo habeeyay koodhka Wakiilka Isticmaalaha iyo UI.
Taageero si loo waafajiyo (u hagaagsan). Taageerada sirta, taariikhda iyo calaamadaha. Waqtigan xaadirka ah waxay kaliya qaban doontaa goobaha FTP, laakiin shaqo ayaa durba socota in lagu daro taageerada waxyaabo badan oo beddel ah (Mozilla Sync, Git Repos, Google Bookmarks, WebDAV, Digg) qaababka mustaqbalka.
Isbedelada xulashooyinka WebKit:
Tabyo lagu daray bogagga Rekonq, taas oo fududeyn doonta wax ka qabashadeeda.
Hagaajinta ku saabsan maaraynta soo degsashada iyo sidoo kale bogga soo dejinta, oo muujinaya goorta faylka la saaray iyo goorta ay dhab ahaan jirto.
Dayactirrada ku saabsan astaamaha, gaar ahaan faahfaahinta qaarkood ee ku saabsan favonsons-ka shabakadaha waa la hagaajiyay.
Furayaasha kulul. Kuwaas oo laga keenay Arora waxaana la hagaajiyay ka dib markii la hirgaliyay Guureeye.
Maareynta kalfadhiga isticmaalaha. Ugu dambeyntii rekonq waxay dib u bilaabi doontaa ganaax markii kalfadhiga KDE dib loo soo celiyo 😀
Taageerada codsiyada websaydhka Sharaxaadda tan waxaa laga arki karaa fiidiyaha soo socda: Fiidiyowga YouTube-ka
Muddo bil ah ama ka dib ayaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysanno nooca deggan.
Si tartiib tartiib ah Rekonq ayaa horay usocota, inkasta oo aysan wali go aansanin inay taageeraan kudarka / dhameystirka, waxaan u maleynayaa inay tahay bedel aad ufiican 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wararka iyo faahfaahinta Rekonq 0.9 ayaa noo keeni doona
Waan ku faraxsanahay in horumarka Rekonq uu noqday mid firfircoon, waxa yaabka leh ayaa ah in qupzilla ay u muuqatay inay cadaadis saareyso isaga. Taasi waa sababta aan tan dambe ugu sii hayo biraawsar labaad kadib Opera, waa biraawsar ballan-qaadaya wax badan, oo kolba marka ka dambeysa soo ifbaxaya marba marka ka dambaysa.
Waxaan rajeynayaa inaad horay ugu sii socoto sidan.
Waxa igu dhaca Rekonq ee KDE waa inuu si joogto ah u xirmo ka dibna uu muujiyo fariin qalad ah si aan u soo sheego.Taas waxay igu kaliftay inaan isticmaalo Opera, oo sidaan qabo ay si caadi ah ugu socoto KDE, kana wanaagsan Chromium. (Firefox waa mid jahawareersan oo leh darawalada Nvidia ee deegaanka leh).
Debian-kayga oo leh Openbox midka ugu fiican (aniga) waa Chromium
GMultiMMS. Maamulaha soo dejinta MMS
Android waa loo oggol yahay adeegsiga Pentagon